काफल पाकेसँगै किन कराउँछ 'काफल पाक्यो चरी' ? - हाम्रो देश
‘बेडू पाको बारो मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला…’ भारतको उत्तराखण्ड लगायतको भेगमा प्रसिद्ध यो गीत स्व. मोहन चन्द्र उप्रेतीले लेखेका हुन् । उत्तराखण्डमा चर्चित रहेको यो गीतले काफलको महिमा र काफल पाकेसँगै आउने काफल पाक्यो चरीको व्याख्या गरेको छ । नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी मुलुकमा समेत विशेष रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
काफलको ‍औषधीय गुणहरू
काफल अमिलो-गुलियो एवं रसिलो फल हो । यो फलले जिब्रो मात्र लोभ्याउँदैन, यसमा औषधिय गुण पनि हुन्छ । विभिन्न समस्यामा काफलको दाना, बोक्रा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ज्वरो आएमा, घाँटीको समस्या भएमा, दम बढेमा, रगतको कमी भएमा काफलको सेवन उपयोगी हुन्छ । खाना अरुची भएमा काफलको सेवनले लाभ मिल्ने बताइन्छ । साथै मधुमेह रोगको लागि पनि यो रामबाण हो । आयुर्वेद विशेषज्ञहरुले यसमा एन्टी अक्सिडेन्ट भरपुर मात्रामा पाइने बताएका छन् । यस फलको सेवनले मुटु लगायत क्यान्सर रोगको जोखिम कम गर्ने बताइन्छ ।
कानको रोग, आँखाको रोग, अनियमित मासिक स्राव, टाउको दुखाई आदिमा काफलको धुलो, बोक्रा आदिको औषधी बनाएर सेवन गर्दा लाभ मिल्ने बताइन्छ । यसैगरी दम, नपुंशकतामा समेत काफल उपयोगी हुन्छ । बाहिरी घाउचोट निको बनाउन काफलको बोक्राको धुलो प्रयोग गर्न सकिन्छ ।